Ii-FAQs-Liaocheng Habo Import and Export Co., Ltd.
Q: Ithini inkonzo yakho emva kokuthengisa kunye newaranti?
A: Sithembisa ukuthwala olu xanduva lulandelayo xa kufunyenwe imveliso eneziphene:
Iwaranti yeenyanga ezi-1.12 ukususela kusuku lokuqala lokufumana iimpahla;
2.Utshintsho luya kuthunyelwa kunye nempahla yeodolo yakho elandelayo;
I-3.Imbuyekezo yeemveliso ezineziphene ukuba abathengi bafuna.
Umbuzo: Ngaba uyayamkela imiyalelo ye-ODM ne-OEM?
A: Ewe, sibonelela ngeenkonzo ze-ODM&OEM kubathengi behlabathi lonke, siyakwazi ukwenza izindlu ngokweendlela ezahlukeneyo, kunye nobukhulu kwiibrendi ezahlukeneyo, sikwalungisa ibhodi yesekethe kunye nebhokisi yokupakisha ngokweemfuno zakho.
Umbuzo: Yintoni i-MOQ?
A: I-MOQ yi-10pcs yeemveliso ezisemgangathweni;kwiimveliso ezilungiselelweyo, i-MOQ kufuneka ixoxwe kwangethuba.Akukho MOQ yeeodolo zesampulu.
Umbuzo: Lingakanani ixesha lokukhokela?
A: Ixesha elikhokelayo lee-odolo zesampula yi-3-5 iintsuku, kwii-odolo ezininzi ziyi-5-15 iintsuku.
Umbuzo: Uzifaka njani iiodolo?
A: 1. Sithumelele i-imeyile imodeli, uphawu kunye nobuninzi, ulwazi lwabathumeli, indlela yokuthumela kunye nemigaqo yokuhlawula;